Wakaaladda socdaalka oo ka biyo diiday fikirka KD - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wakaaladda socdaalka oo ka biyo diiday fikirka KD
La daabacay fredag 19 december 2014 kl 11.23
Xisbiga Kristdemokraterna (KD) ayaa soo ban-dhigay fikir lagu dhimayo kharashka ku baxa dadyoowga qaxooti-nimada Iswiidhen ku yimaada. Hase yeeshee ay wakaaladda socdaalku sheegtay in tallaabooyinka uu xisbiga KD sheegay iyo in magan-gelyo doonka la siiyo deggenaansho ku meel gaar ah oo saddex sannadood ku eg, halka iminka laga siiyo dadyowga dalabkooda la aqbalo sharci deggenaansho oo joogto ah uu laba jibbaareyo howlaha wakaaladda socdaalka.
Halka ey dhanka kale ka gaabsadeen iney ka faalloodaan hoggaamiyeyaasha saddexda kale ee garabka midig, inkasta oo xisbiga KD uu ku war-geliyey fikirradiisa la xiriira dhimista miisaaniyadda qaxootiga dalka magan-gelyo doonka ku yimaada.
Wakaaladda socdaalka ayaa qabta in sharciyada deggenaansho ee ku meel-gaarka ey ku kordhineyaan howl-wadeennada wakaaladda socdaalka shaqo dheeri ah. Maadaama ey tahay in dib loo eego dadyoowgaa kolka uu sharcigooda deggenaansho ka dhammaado.
- Waxay la macnahe noqon in saddex sannadood dabadeed kolka uu ka dhaco sharciga deggenaansho ee ku meel-gaarka dib loo eego xaaladda uu ku sugan yahay waddanka uu shakhsigu ka yimid iyo in dib loogu celin karo. Iyada oo ruux walba ay tahay in si gooni ah loo eego, sida uu sheegay Fredrik Bengtsson, madaxa laanta saxaafadda ee wakaaladda socdaalka.
Isagoona amuurtaa u barbar dhigey qaxootigii soomaalida ee horraantii sannadkii 2000, kuwaasina oo la siiyey sharci deggenaansho oo ku meel-gaar ah.
- Kolkii uu sharcigii deggenaansho ee ku meel-gaar uu ka dhacay ayey mar kale dib u soo dalbadeen deggenaansho joogto ah iyo iney dib nidaamka howlaha wakaaladda socdaalka kow uga soo bilaabaan. Sharciga deggenaansho ee ku meel-gaarka ah wuxuu inta badan hor-seedaa inuu noqdo mid joogto ah, sida uu sheegay.
Su'aasha ah - Sideed u aragtaa in fikirrada xisbiga KD uu howlaha ku kordhineyo wakaaladda socdaalka ayay sidan uga jawaabtay Acko Ankarberg (KD), ahna xog-haynta xisbiga.
- Waa wax dhici kara, hase yeeshee haddii la caddeeyo in baahidii magan-gelyo eay weli taagan tahay - waa ay sahlan tahay in la qeexo. Markaa wuxuu sharciga deggenaansho ee ku meel-gaarku markiiba isu rogin mid joogto ah. Hase yeeshee waxaan ku lifaqnay suurtagalka ah in shakhsiga saddexdaa sannadood ey dhamaato isaga oo shaqa haysta uu xaq u leeyahay in la siiyo deggenaansho joogto ah.